Koorsada Waxbarshada Khadka Tooska ah, Macallinka Shiinaha, Ka Baro Shiinaha Online - Huayu
U hoggaansanaanta fikradda aasaasiga ah ee "is-weydaarsiga dhaqanka, luqadda ugu horreysa", iskuulku wuxuu qaataa qaabka aasaasiga ah ee "macallimiinta Shiinaha, ardayda adduunka oo dhan" si ay u qabtaan barista Shiinaha.
Noocan ah tababarka dhiirigelinta ayaa ah kan ugu waxtarka badan! Weli, boos celin badan awgeed, waxaa hadda jira liiska sugitaanka si loo aado kulanka
Halkaan, kaliya kulama kulmi kartid macalin maad ah, laakiin sidoo kale waxaad ka caawin kartaa cunugaada inuu helo lammaane uu wax la barto, si aadan mar dambe kaligaa ugu noqon doonin barashada Shiinaha.
Nomi wuxuu ku adkeysanayaa hal-abuurnimada wuxuuna qaatay qaabka Internetka + Waxbarashada si aan si joogto ah nafteena ugu horumarino isla markaana aan u kobcinno khibradaha isticmaalaha.
In kabadan 500 oo arday ayaa nala bartay luuqada Shiinaha waxaana helnay amaan badan waalidiinta iyo ardayda aduunka oo idil.
Waxay aad u jeceshahay fasalka Ms. Ding, Ms. Ding marwalbana way awoodaa inay dareenkeeda ku soo jeediso fasalka. Aad ayey gaabis u ahaan jirtay markay shaqadeeda guriga qabanayso. Hadda waxay dhammeyn doontaa shaqadeeda guriga ee Shiinaha sida ugu dhakhsaha badan markay dhamayso fasalka umana baahni inaan mar dambe kormeero iyada.
- Hooyada Jay
Wuxuu ku barbaaray Mareykanka mana jiraan saaxiibbo Shiineys ah oo ku xeeran. Wuxuu la xiriiri kari waayey awoowayaashiis markii aan ku laabannay Shiinaha waagii hore. Sannadkan waxaan dib ugu celin doonaa isaga oo ka yaabiya ayeeyadiis iyo ayeeyadiis! Waad ku mahadsan tahay Ms. Han caawimaaddeeda iyo dulqaadkeeda Raymond, mahadsanid badan!
- Hooyo Raymond
Mahad gaar ah macallimiinta Nomi Chinese online. Maaddaama ay tahay inaan daryeelo ilmaha ugu yar, ma sii wadi karo inaan barbaariyo carruurtayda kale.
Ms. Zhu wax badan ayey i caawisay. Carruurtaydu wax bay la baranayeen in ka badan sannad. Hadda si madaxbanaan ayey u aqrin karaan sheekooyinka sifiican ayey igula hadli karaan iyagoo Shiineys ah guriga.
- Yihan hooyadeed
Runtii waan ku faraxsanahay Marwo Hu. Waagii hore, had iyo jeer waxay ku qaadan jirtay Leo ilaa hal saac inuu sameeyo xisaabta iskudarka iyo kalagoynta. Markuu bartay Ms. Hu muddo laba bilood ah, wuxuu hadda ku dhammayn karaa 100 dhibaato xagga xisaabta ah 10 daqiiqo oo heerka saxda ah isna aad buu u sarreeyaa. Waxaan rajeynayaa in xisaabta Leo ay ka sii fiicnaan karto oo ka sii fiicnaan doonto umana baahni inaan mar dambe ka walwasho.
- Leo hooyadiis
Maxay yihiin meelaha ugu fudud ee lagu barto Chine ...
Dad badan ayaa sheegaya in barashada Shiinaha ay adag tahay. Xaqiiqdii, maahan. Xaqiiqda ah in jilayaasha Shiinaha ay runtii u baahan yihiin laylisyo xusuus ah, Shiineysku sidoo kale wuxuu leeyahay fudeydkiisa marka la barbar dhigo luqadda kale ...
Dhawaan, arday leh aasaas eber dhammaystiran, markay baratay saddex fasal, waxay ii sheegtay inay u beddelayso macallin ku takhasusay afka Ingiriiska maxaa yeelay ma doonayso inay barato naxwaha Shiinaha ama HSK-rel ...
daawo dhamaan wararka
Nomi Chinese online waa madal waxbarid Shiine ah oo khadka tooska ah laga maalgaliyo oo ay dhisto Ningbo Huayu Network Technology Co., Ltd. Nomi waa meesha ay jecelyihiin dhamaan dadka jecel dhaqanka Shiinaha ee adduunka oo dhan inay wax ku bartaan, ku soo kulmaan kuna wada xiriiraan. U hogaansanaanta fikradda aasaasiga ah ee "isweydaarsiga dhaqanka, luqadda ugu horreysa", dugsigu wuxuu qaataa qaabka aasaasiga ah ee "macallimiinta Shiinaha, ardayda adduunka oo dhan" si ay u qabtaan barista Shiinaha.
Nomi wuxuu ku adkeysanayaa hal-abuurnimada wuxuuna qaatay qaabka Internetka oo lagu daray Waxbarashada si joogto ah nafteena kor loogu qaado loona kobciyo khibradaha isticmaalaha
Waxyaabaha waxbarida aasaasiga ah ee “hal-ka-badan, is-dhexgalka” ayaa si guul leh looga bilaabay dalal badan oo adduunka ah waxaana si ballaaran u ammaanay ardayda dibedda.
wax ka baro qalbigaaga ， farxad ayaa raacda.